I-Il Mono Dieci - i-studio flat imizuzu engu-20 ukusuka e-Milan - I-Airbnb
I-Il Mono Dieci - i-studio flat imizuzu engu-20 ukusuka e-Milan
Bollate, Lombardia, i-Italy
I-ifulethi ephelele ibungazwe ngu-Carlo
U-Carlo Ungumbungazi ovelele
Istudiyo sendawo evulekile esintofontofo esinamamitha-skwele angu-49, esihlanganisa umbhede olala abantu ababili, indawo yekhishi elikhulu, indawo yokuphumula enombhede wesofa, igumbi lokugezela negumbi lokugqokela elinamakhabethe nomshini wokuwasha. Itholakala esitezi sokuqala sendawo yokuhlala esanda kwakhiwa, i-studio iseduze kakhulu nesiteshi sesitimela sase-Bollate nazo zonke izinsizakalo ezibalulekile. Ifulethi linomabonakude, uxhumano lwe-inthanethi nomlandeli. Ilungele abahambi, abantu abahamba ngebhizinisi, abantu abashadile noma amaqembu abangane abathathu.
I-studio sinamafasitela amabili ayenza igqame, inovulande obheke egcekeni lendawo eyakhiwe ngamatshe. Ikhishi linakho konke okudingekayo, ne-hob enkulu yegesi, uhhavini nezinto zokupheka ezihlukahlukene. Ithelevishini eguquguqukayo ivumela ukubukwa kusuka kuwo wonke amakhona endlu.
I-The Mono 10 isendaweni ekhonjiswe kahle kakhulu, indawo yokuphonsa amatshe ukusuka enkabeni yedolobha kanye nemizuzu embalwa yokuhamba ukusuka esiteshini sesitimela, lapho ungafinyelela khona enkabeni yedolobha lase-Milan emizuzwini engu-20. Kulabo abafika ngemoto kunendawo enkulu yokupaka yamahhala engu-50m ukusuka efulethini, ebonakalayo ukusuka kuvulande wendlu. Endaweni eseduze kunamamakethe amakhulu, ama-bar, izindawo zokudlela, ibhange, ihhovisi lokuposa nezindawo eziluhlaza.
Ngizohlala ngitholakalela ukunikeza usizo nemininingwane nge-imeyili, i-sms ne-WhatsApp. Ngizokuphatha ngokwami ukungena / ukuphuma kanye nemisebenzi yokuhlanza. Uma kwenzeka ngingekho endaweni, ukungena / ukuphuma nokuhlanza kuzolawulwa elinye lamalungu omndeni wami ahlala e-Bollate.
Ngizohlala ngitholakalela ukunikeza usizo nemininingwane nge-imeyili, i-sms ne-WhatsApp. Ngizokuphatha ngokwami ukungena / ukuphuma kanye nemisebenzi yokuhlanza. Uma kwenzeka nging…
Inombolo yepholisi: 015027-CNI-00012
Hlola ezinye izinketho ezise- Bollate namaphethelo